Aguero Oo Goolkiisii Koowaad Dhaliyey, Coutinho Oo Ismuujiyey Iyo Barcelona Oo Ciyaar Tijaabo Ah Barbarro Kasoo Hoysay - Laacib
Aguero Oo Goolkiisii Koowaad Dhaliyey, Coutinho Oo Ismuujiyey Iyo Barcelona Oo Ciyaar Tijaabo Ah Barbarro Kasoo Hoysay
Weeraryahanka reer Argentina ayaa ugu dambayn garoomada soo galay isaga oo xidhan shaadhka kooxdiisa Barcelona ee uu sida bilaashka ah ugu soo wareegay xagaagii, waxaanu u saftay ciyaartiisii labaad oo uu u dhaliyey goolkiisii ugu horreeyey ee waayihiisa Blaugrana.
Barcelona ayaa maanta ciyaar saaxiibtinimo oo ay albaabadu u xidhan yihiin la ciyaartay kooxda yar ee UE Cornella, waxaana xiddigihii ay jamaahiirta oo aan loo ogolayn gudaha garoonku ay warbaahinta ka arkeen isagoo shabaqa soo taabanaya ka mid ahaa Sergio Aguero.
Laacibkan ayaa muddo dheer ay sugayeen taageereyaashu inay arkaan isaga oo ku labbisan dharka Barcelona oo ciyaaraya kaddib ciyaartii Joan Gamper ee horraantii xilli ciyaareedka oo uu qaybtii dambe kasoo muuqday kulankii ay Juventus koobka kaga qaadeen.
Galabta ayay Barcelona ciyaar saaxiibtinimo oo ay iskugu diyaarinayso kulanka Valencia ee Axadda waxay la dheeshay kooxda heerka labaad ee UE Cornella, waxaana ciyaartoydeedu u badnaayeen kuwa heerka labaad, hase yeeshee waxa kasoo dhex muuqday Sergio Aguero oo gool dhaliyey iyo Philippe Coutinho oo isaguna shabaqa soo taabtay.
Ciyaartan oo kusoo dhamaatay barbarro 2-2 ayuu tababare Ronald Koeman ku qiimaynayay Sergio Aguero oo soo laabashadiisu imanayso xilli ay kulamo adag kusoo fool leeyihiin, isla markaana ay xaalad xun ku jirto kooxdu.
Goolka uu dhaliyey Sergio Aguero iyo midka uu ku daray Coutinho ayaa u ahaa Koeman kuwo uu siiyey ifafaale wanaagsan iyo in laacibiintani si dhab ah uga soo kabanayaan saamayntii ay dhaawacyyadu ku yeesheen.
Aguero ayaa tababarka la qaadanayey ciyaaryahannada Barcelona illaa Arbacadii toddobaadkii hore, laakiin waxa ka maqan dersin ciyaartooyo ah oo ku maqan kulamada caalamiga ah oo aan qayb ka noqon laylisyadii ugu dambeeyey, sida Eric Garcia, Sergio Busquets, Gavi, Sergio Roberto, Memphis Depay, Frenkie de Jong, Araujo iyo kuwo kale.